Ọnụahịa nke Oppo A92s kwadoro, yana ụdị ya dị iche iche | Gam akporosis
E gosipụtara ego nke Oppo A92s, yana ụdị agba ya dị iche iche
El Opo A92s Ọ bụ otu n'ime ndị na-esonụ na-ajụ-arụmọrụ mobile phones si China emeputa. Nke a na - eweta ịkọ nkọ banyere nkọwapụta ya na njirimara ya, yana, n'ezie, maka nkwụsị tupu ngosi ya na ụbọchị mbido mechara rute.
Na a ndondo emi anyị kwuru banyere ihe ị ga-atụ anya na ngwaọrụ a. Akụkọ ahụ kwuru ọnụ ahịa nke otu ụdị dị iche iche, tinyere ụfọdụ àgwà ndị ga-ekwe omume bụ́ ndị ọnụnọ a anyị na-eche kemgbe ga-apụta.
Na mbụ ọ leaked na a ga-enwe a mbipute nke 8 GB nke Ram + 128 GB nke esịtidem ohere nchekwa UFS 2.1. Ihe nlereanya a, dị ka otu akụkọ ahụ si kwuo, Ọ ga-abịa na ọnụahịa nke yuan 2,499, ọnụ ọgụgụ nke ya na ihe dịka 325 euro ma ọ bụ 355 dollar na ọnụego mgbanwe gọọmentị. Ọgba mmiri ugbu a na-ekwughachi ozi a maka ọdịiche a, nke mere na ozi ahụ yiri ka ọ bụ eziokwu. O kwukwara na ọ ga-abata n'ụdị agba atọ, nke bụ nwa, ọcha na pink.
Oppo A92s ọnụahịa na ụdị dị iche iche
A maraworị na nke ahụ ihuenyo nke ekwentị a ga-abụ 120 Hz, nke bụ otu ihe ahụ na-ekwu na ọ na-ewepụta ogwe 120 kwa nkeji (fps), nke na - eme ka ọ bụrụ ezigbo ọnụ maka ndị na - egwu egwuregwu ebe ọ bụ na ọ gụnyere ahụmịhe egwuregwu na - agba mmiri karịa nke achọpụtara na smartphones nwere ogwe 60 Hz (akara ngosi) na 90 Hz Ihuenyo ga-abụ IPS LCD teknụzụ ma nwee diagonal nke 6.57 sentimita asatọ.
Igwe mkpanaka nke ngwaọrụ ahụ ga-eji ga-abụ ihe nhazi Dimensity 800 si Mediatek. Enwekwara igwefoto quad n'azụ nwere ihe mmetụta sensọ 48 MP, oghere 8 megapixel buru ibu na ụzọ abụọ sensọ megapixel abụọ ga-abụrịrị maka ịnwe foto buru ibu na onyonyo nwere mmetụta miri emi. Akwadoro Oppo A2s yana onye na-agụ akara mkpịsị aka n'akụkụ. Ọ ka ga-amata mgbe a ga-ahapụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » E gosipụtara ego nke Oppo A92s, yana ụdị agba ya dị iche iche
Akwụkwọ ọkwa nke Huawei MatePad 10.4 gosipụtara ụfọdụ atụmatụ ya
Ngwa ekwentị Google dị ugbu a maka ụfọdụ smartphones na-abụghị Pixel